Danieri Chitsauko 2. Tsoka dzedare nevhu
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Danieri Chitsauko 2. Tsoka dzedare nevhu
Danieri Chitsauko 2. Tsoka dzedare nevhu
Danieri akaona mufananidzo wemuHedeni unomiririra hushe huna hwevaHedeni. Tsoka dzaive mucherechedzo wemakore 2000 enhorondo yekereke anozivikanwa nekunzi nguva nomwe dzemakereke.
Danieri akazivisa chiprofita chakadzama chaiziviswa nemufananidzo wemuHedeni. Makore akapoteredza 600 BC mambo weBabironi nechiprista (musoro wendarama une mazano akanakisa) vakaisa pfungwa yezodiac yenyeredzi dzinotsanangura zvichawira vanhu, zuva rekuberekwa kwamwari wezuva pakati penguva yechando, Ishita egi, nemaishita rabiti munguva yezhizha, vamwari vazhinji, uye mambo wezvematongerwo enyika achibata zvakare munezvechitendero paanobatanidza zvematongerwo enyika, zvechitendero, uye simba munezvemari pamunhu mumwechete. Muprista mukuru weBabironi aidaidzwa kuti Pontiff.
Neimwe nzira mazano aya aizopararira kuenda kumadokero otonga mafungiro evanhu mumakereke.
Mazano aya aizosimudzirwawo kubva pahunyanzvi hwehushe hwePersia hwekuvaka maguta uye nzira dzavo dzekuita mapato akarongwa zvakanaka. Semavoko emufananidzo wemuHedeni, vaPersia vakaunganidza marudzi kuaita hushe hukuru hwepasi rese hwekutanga. Zvino kukanganisa kwezvechitendero kwakabva kwakura nekuda kwefirosofi yemaGiriki yaizopedzisira yawananiswa nemazano emapegani zvichipindira muchitendero chemaKristu.
Zvakavanzika zveBabironi zvaizoguma zvapinda muRoma yemaPegani paizoitwa Jurio Kesario Pontiff uye mudzvanyiriri weRoma. Makumbo edare anomiririra simba rekuparadza remauto eRoma. Vachibvisa chero hupikisi yaive nzira yakanaka kuti arambe ari mudzvanyiriri kwehupenyu hwake hwese. Mubati weRoma yemaPegani akatora chigaro chaPontiff, muPrista mukuru wezvakavanzika zveBabironi. Mazano aya aizopinda mukereke yeRoma oiita kuti ive Babironi rakavanzika apo chiKristu nechipegani zvinorukaniswa pamwechete.
Panguva iyoyo, ruponeso rwaive rwemaJuda rusina chekuita nehushe hwevaHedeni hwaitungamirirwa nezvematongerwo enyika.
Chiprofita chekutanga kuna Genesis chakataura pamusoro pechitsitsinho chetsoka yeMbeu yemukadzi inova Jesu Kristu. Anoberekwa nemhandara asina munhu wenyama anonzi baba vake. Jesu ndiye ega munhu akaberekwa pasina kusangana pabonde.
GENESISI 3:15 Ndichaisa ruvengo pa­kati pako nomukadzi, napakati porudzi rwako norudzi rwake, irwo rwuchapwa­nya musoro wako, newe uchapwanya chitsitsinho charwo."
Rangarirai, Eva akarangwa nekuda kwekutora kwaaive aita mimba.
Jesu, Munhu mumwechete ega akaberekwa pasina kusangana pabonde akauraiwa neruzhinji rwevanhu vakaberekwa nekusangana pabonde. Kuzvara mwana kunorwadza uye kunotsverudza. Mhosva dzekusangana pabonde uye zvivi, uye matambudziko azvinofambidzana nazvo, zvese zvichiri kutonga mumisoro yenhau dzedu. Kune chimwe chinhu chiri kupesana nemakereke kana tasvika panyaya yechivi chekutanga. Tinoti mukadzi abata mimba. Mimba dzinoyananiswa nekubata kwaEva.
Hondo huru pakati paJesu naSatani yakarwiwa paCalvari. MaJuda akaroverera Jesu ruponeso rukayambukira kuvaHedeni. (Izwi rekuti “muchinjikwa” mucherechedzo wekuyambukira). Kuyambuka kwakaitika pachitsitsinho chemufananidzo wemuHedeni. Ndipo pakapindira rushinda rweruponeso pamufananidzo wemuHedeni.
Saka tsoka dzemufananidzo wemuHedeni mucherechedzo wemakore 2000 enhorondo yekereke inonyanya kutarisana nevaHedeni zvakanyanya.
Muna 378 AD Theodosius akava mubati weRoma ari muKristu akaramba chigaro chaPontiff. Hushe hweRoma hwakatanga kutambura nekumanikidzwa nemarudzi evatorwa aiuya kuzopamba nekurwisa uye kutsvaga kupotera. Mumvonga-mvonga iyi yese, Bhishopu weRoma akatora chinzvimbo chaPontiff, chaachiri kushandisa nanhasi uno. Pakawira pasi hushe hweRoma hwaive dare rakabatana, Pope wekereke yeRoma kana Pontiff akasimuka kuva nesimba pamusoro pemarudzi evatorwa ese muEurope.
Zvitendero zvemapegani zvakapindira mukereke kuti kereke itambirike kumarudzi evatorwa vechipegani.
Kisimusi. 25 Zvita. Muti weKisimusi wakashongedzwa. Mazai eisita nemaisita rabhiti. Nezvimwe zvakadaro.
Kereke yaive yatanga kujaira kushandisa mazano akanga asina kunyorwa muBhaibheri.
Asi vanhu vakasiyana vakafunga vakatanga kushandisa mazano akasiyana vakaparadzana pachavo.
Kuzivisa mazano asina kunyorwa muBhaibheri kwakaita senzira yakanaka kukurudzira mapegani kuti apinde mukereke asi paiwedzera mazano aya, vanhu vakatanga kupatsanurana kuita mapoka akasiyana siyana anonzi masangano. Boka rimwe nerimwe rinoti rinogona. Boka rimwe nerimwe rakaguma rava pasi pemunhu mumwechete anotungamirira kuitira kukura kwekereke. Dare reRoma rakaita kuti munhu wezvechitendero, sezvakaitwa naKesario, kuti ave musoro wekereke. Mutungamiri wekereke nekuda simba anova mudzvanyiririri nekukasika. Pope weRoma akapedzisira ava mutungamiri wekereke. Nhasi uno Pope ndiye ega mudzvanyiriri muEurope.
Hushe hwechina, makumbo edare, hwaive hushe hweRoma yechipegani hwakakura nekuparadza marudzi aive akarupoteredza. Asi pakupedzisira, marudzi evatorwa akazoparadza hushe hweRoma. Asi Roma yakabva yamutsiridza simba rayo rezvematongerwo enyika pamusoro peEurope payakamuka yava kereke yeRoma uye sangano nesimba rezvemari.
Zvakatangwa neRoma yechipegani iri simba rezvematongerwo enyika zvakazotevedzerwa nekereke yeRoman Catholic iri simba munezvemweya.
DANIERI 2:40 Ushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nokuparadza zvose; sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo uchaputsanya nokupwanya.
Saka Satani akadzikisira kereke. Mweya wemasangano wakasimba kwazvo zvekuti mazano akasiyana siyana anokwanisa kuparadza kereke kuiita zvidimbu zviduku zviduku. Zvino mapoka akasiyana siyana akarwisana akakuvadzana. Kusawirirana pamusoro peTiriniti isimo muMagwaro kwakaita kuti vanhu vaurayane. Rudo rwesimba mukereke muNguva yeRima rwakaita kuti vanhu vakanaka vakawanda vauraiwe nekurwadziswa nekuti vaive vasina chekuita nebato rekereke.
Kereke yeRoman Catholic yakasimuka sesimba rezvematongerwo enyika uye simba munezvemari zvinomiririrwa nezvidimbu zvedare zviri mutsoka dzemufananidzo wemuHedeni. Dare rakasimba. Kereke yeRoman Catholic ndiyo ine mutsetse wakarebesa wevatongi, vanaPope, munyika dzekumadokero. Saka vakakunda uye vakasimba.
Munhu mumwechete anotungamirira kereke akabva ava nzira yakanakisa yekurarama kwekereke, kunyanya pavakadzidzisa Tiriniti yeVanhu vatatu muhuMwari. Zvekuti vakapanduka vakabuda mairi vakaenda asi vakaramba vaine dzidziso yeCatholic zvekuti masangano evakabuda mairi akakunda kurarama munhandare dzepasi rese. “Pasita” watinodaidza kuti mufundisi anonzi mufudzi muBhaibheri akataurwa kamwechete muTestamente Itsva akatukwa katanhatu mukuprofita kwaJeremia. Asi zvakadaro hushumiri uhu hwakava musoro wekereke uye mubati wemari dzechegumi. ((Kune ataura nezvaJudasi here?) akazadzwa nerudo rwemari nyika yemakereke yaparara pasi pehutongi hwemapasita ayo apatsanurana kuita masangano anodarika 45,000 akasiyana-siyana. Imwe neimwe inoti ine chokwadi chese. Mufananidzo wemuHedeni wakaramba uchipatsanuka kuita makumbo maviri ukazoita zvigumwe gumi. Kupatsanurana ndiko kuita kwemakereke evaHedeni.
Rudo rwemari uye rudo rwesimba pamusoro pevanhu ndiro dare rakasimba remasangano rakaita kuti vanhu vazvitsvagire mazita kuti “ndipasita” kana bhishopu kana kadhinari kana Pope. Chero vari ndivo misoro yekereke.
Mari nesimba zvinobereka masangano evanhu. Iri ndiro dare rakaita masangano nemapato kuti asimbe apo mutungamiri mumwe nemumwe achizvivakira hushe hwake.
DANIERI 2:41 Zvamakaona tsoka nezvigunwe, zvakaitwa pamwe nevhu romuumbi wehari, pamwe nedare, uchava ushe hwakaganhurwa; asi simba redare richavamo, zvamakaona dare rakavenganiswa nevhu
Asi kupatsanurana kunoitika nekuda kwevanhu vamwe vanotevera Jesu neBhaibheri pachinzvimbo chapasita.
Asi Kristu ndiye anofanira kuita Musoro wekereke.
VAEFESO 5:23 Nokuti murume musoro womukadzi, saKristuvo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuviri
Saka pane umwe mudziyo uri pabasa munguva dzemakereke. Ivhu.
Ivhu ndiro rega mukati mezvese zvakaumba mufananidzo wemuHedeni rinogona kuita hupenyu mariri. Saka kucharamba kuine maKristu anotungamidza Bhaibheri naJesu pamberi pebato ripi neripi ringavapo. Vanotenda chete zvinotaurwa neBhaibheri uye havafadzwi nemari, mbiri uye simba. Rudo rwavo rumwechete nderwekutevera Shoko rakanyorwa muMagwaro.
Kuti ivhu riunze hupenyu, rinofanira kunyorova.
Bhaibheri rinoti “ivhu rakanyorova” ndiro ivhu rakanyorova rakagezwa mumvura uye rinogona kuumbwa nemuumbi mukuru.
MaKristu aya ndiwo Mwenga kana kereke yechokwadi sezvo vanotaura chete zvinotaurwa neBhaibheri. Nekuti vanotenda zvinotaurwa neBhaibheri pachinzvimbo chemamwe mazano evanhu asimo muBhaibheri akaita seKisimusi, kuva nhengo yekereke, masangano nezvimwe zvakadaro. Vanosukwa vachinatswa neMagwaro akanyorwa chete.
Mumashure mechirairo, chinhu chisina kujairika chakaitika.
Jesu akaisa kukosha kwakasimba patsoka paakashambidza tsoka dzevadzidzi vake.
Petro akaedza kuramba asi Jesu akamuyambira akamuudza kuti ashambidzwe tsoka dzake. Zvino Petro aida kuti Jesu ashambidze musoro wake, mavoko, netsoka. Jesu akati kwete. Tsoka dzake chete ndidzo dzaifanira kushambidzwa.
Jesu aiedza kuvadzidzisa chimwe chinhu chavaisanzwisisa.
JOHANE 13:8 Petro akati kwaari: Hamungatongoshambidzi tsoka dzangu nokusingaperi. Jesu akamupindura, akati: Kana ndisingakushambidzi, haunomugove neni.
9 Simoni Petro akati kwaari, Dzirege kuva tsoka dzangu dzoga, asi mavoko angu nomusoro wangu vo.
10 Jesu akati kwaari: Wakashambidzwa haashaiwi chinhu asi kushamba makumbo bedzi ipapo watonatswa iye wose. Imi makanaka asi hamuzi mose.
Jesu aitaura pamusoro paJudasi nekugezwa kwezvivi.
Izvi zvaive zvisina chekuita nekugezwa kweguruva kubva mutsoka dzavo sezvo zvaive zvaitwa pavakapinda mumba. Panguva iyi vaive vatodya chirairo kare. Tsoka dzavo dzaive dzashambidzwa kare kubva kuguruva pamukova pavakapinda mumba.
Zvaive zvisina chekuita nekuzvininipisa sezvo Jesu akati Petro haaigona kunzwisisa izvi ipapo. Aizozvinzwisisa nguva yaizouya.
JOHANE 13:5 Zvino akadira mvura mumudziyo, akatanga kushambidza tsoka dzavadzidzi vake, akadzipisika nomucheka, waakanga akazvisunga nawo.
6 Akasvika kunaSimoni Petro, iye akati kwaari: Ishe, imi moshambidza tsoka dzangu kanhi?
7 Jesu akapindura, akati kwaari: Chandinoita hauchizivi zvino; asi uchazvinzwisisa pashure.
Chidzidzo chikuru chaizodzidzwa naPetro ndechekuti kudii?
Mwari akamuratidza chiratidzo chekudya zvipenyu zvisina kuchena katatu. Zvishoma nezvishoma Petro akaita achiziva kuti maHedeni ainyenyeredzwa nemaJuda vaizoponeswa zvakare.
MABASA 10:10 Akaziya kwazvo (Petro), akada kudya; zvino vakati vachagadzira akabatwa nomweya;
11 akavona denga razarurwa, nechimwe chinhu chichiburuka somucheka mukuru unoburusirwa pasi wakasungwa miromo mina.
12 Maiva nemhuka dzose dzinamakumbo mana nezvinokambaira zvenyika, neshiri dzedenga.
13 Inzwi rikavuya kwaari, richiti: Simuka Petro, baya, udye.
15 Ipapo inzwi rikavuya zve kwaari rwechipiri, richiti: Chakanatswa naMwari, usati, chinetsvina iwe.
16 Izvozvo zvakaitwa katatu, chinhu chikakwidzwa pakarepo kudenga.
Chidzidzo chaPetro chikuru.
Evangeri raifanira kuendawo kuvaHedeni.
MaHedeni akaponeswa aive akazadzwa neMweya Mutsvene ndiwo ivhu rakanyoroveswa mutsoka dzemugananidzo wemuHedeni. Vakanyorova nekuti vaive vashambidzwa mumvura dzeShoko. Vapositora vaifanira kutora Shoko raMwari, Evangeri reruponeso, voenda naro kuvaHedeni.
Tsoka dzemufananidzo wemuHedeni chete, dzinomiririra nguva dzemakereke, ndidzo dzega dzinogona kushambidzwa .
Musoro unomiririra hushe hweBabironi hwaive hwaparara kare munhorondo. Babironi yaive yatapwa muna 539 BC.
Mawoko aimiririra hushe hwemaMediani nevaPersia hwaive hwaparara kare, hwakurirwa naAlexander the Great muna 331 BC.
Muna 1960 Khruschev, mutungamiri weRussia, akatsamwa mumusangano wemubatanidzwa wenyika dzepasi rese kekutanga uye kamwechete munhorondo, akabvisa shangu yake akarova nayo papodhiyamu paaitaura ari.
Izvi zvakabva zvaunza ndangariro yetsoka kunyika.
Kubvisa shangu kunoburitsa tsoka pachena.
Panguva yekupedzisira tinoda zaruriro yenguva nomwe dzemakereke inoita tsoka dzemufananidzo wemuHedeni.
Hama Branham vakazivisa chakavanzika chenguva nomwe dzaemakereke nuna 1960.
ZVAKAZARURWA 1:20 Zvakavanzika zvenyeredzi nomwe dzawavona muruvoko rworudyi rwangu, nezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vekereke nomwe; nezvigadziko zvemwenje zvinomwe ndidzo kereke nomwe.
Vatumwa inhume. Chigadziko chimwe nechimwe chinomiririra nguva imwechete yekereke.
Nguva imwe neimwe yekereke yaive nemutumwa akazodzwa kuti avadzosere munzira.
Pauro, Ireneusi, Martin, Columba, Martin Luther, John Wesley, William Branham.
Ava ndivo vaive magamba ekutenda akashandiswa naMwari kubatsira vanhu kuti vawane chokwadi munguva imwe neimwe.
Pamutambo waBerishazzari ndipo pakapera hushe hwekutanga hwevaHedeni hweBabironi.
DANIERI 5:5 Zvino nenguva iyeyo minwe yoruoko rwomunhu yakauya ikanyora pakatarisana nechigadziko chomwenje pasuko remadziro eimba yamambo, mambo akaona chanza choruoko rwakanga ruchinyora.
Ruvoko rwakanyora pamadziro parutivi rwechigadziko chemwenje kuti hushe hwevaHedeni hwekutanga hweBabironi hwaive hwaparara.
Chigadziko chemwenje mucherechedzo wenguva nomwe dzemakereke.
Parutivi rwechigadziko zvinoreva kuti kunze kwechigadziko chemwenje.
Mune mamwe mazwi, panopera nguva dzemakereke runyoro runenge ruri pachidziro chenguva.
Babironi yakavanzika, sangano rekereke yeRoma nevanasikana vayo vakabuda mairi vemasangano vanenge vagumirwa munguva yeKutambudzika kukuru inogumisa hushe hwedu hwevaHedeni hwekupedzisira.
Muprofita Danieri, mukati mehushe hwevaHedeni hwekutanga hweBabironi, akazivisa nhorondo yevaHedeni nenzira yemicherechedzo. Chokwadi chizhinji chaive chakasimbiswa kana kuvigwa kusi kwemeso edu nekuda kwekusaziva kwedu zvinoreva micherechedzo iyi.
DANIERI 12:4 "Asi iwe Danieri, vanza mashoko, unamire bhuku rechisimbiso, kusvikira kunguva yokupedzisira; vazhinji vachamhanya pose-pose, nezivo ichawanda.
Panguva yekupedzisira yehushe hwekupedzisira hwevaHedeni apo ruzivo runenge rwawedzera zvinoshamisa, Mwari achashandisa muprofita William Branham kuzivisa chakavanzika cheZvisimbiso zvinomwe muna 1963. zvakavanzika izvi zvinozotigonesa kuzarura zvakaprofitwa naDanieri nezvimwe zvakavanzika zviri muBhaibheri.
Shangu yaKhruschev muna 1960 yaive “chiratidzo chenguva” kutiyambira kuti magumo ekore 2000 enguva dzemakereke, anomiririrwa netsoka dzemufananidzo wemuHedeni, aswedera.
Zaruriro yezvakavanzika zveShoko inoratidza kuti tava panguva yekupedzisira. Tiri munguva yechinomwe kana nguva yekereke yekupedzisira.
Mwari ari kushanda nevhu riri mutsoka. Ivhu rinomiririra maKristu asingafadzwi netsika dzakaitwa nevanhu uye mirairo yevanhu yemasangano ezvitendero zvavo.
Makereke ekutanga aitungamirirwa nevakuru kana vatariri, kwete nemunhu mumwechete.
Vaitenda zvakanyorwa muBhaibheri chete.
DANIERI 2:42 Zvigunwe zvamakumbo zvazvakanga zvakaitwa pamwe nedare pamwe nevhu, saizvozvo ushe huchava pamwe nesimba, pamwe haungatani kuputsika.
Dare remasangano emakereke rakasimba uye rinobudirira. Ivhu rakapfava vanhu vakazvimiririra vanoedza kutevera Magwaro haisi nzira yakanaka yekuvaka kereke huru. Vachava vashoma vakapararira uye vasina anovaona. Kereke yekutanga yainyanya kusanganirana mudzimba.
Vakasairirwa kubva mukuita kukuru kwemakereke nekuti vanobvunza mibvunzo yeBhaibheri yakawanda, maKristu akamiririrwa nevhu ane sarudzo duku kwazvo saka anobva abuda kubva mumakereke ane mbiri asingateveri Magwaro nedzidziso dzawo. Kereke yechokwadi yevanotenda kuBhaibheri inova yakaneta kwazvo kana zvichienzaniswa nemakereke makuru.
Izvi zvinoenzaniswa nechikara kana simba rakaonekwa naJohane raive nemisoro minomwe nenyanga gumi.
Johane akatanga chete kuona izvi ava murenje inova nzvimbo yaaive ega yeavo vasingadiwi mumakereke makuru.
ZVAKAZARURWA 17:3 Ipapo wakandiisa kurenje mumweya, ndikavona mukadzi akatasva chikara chitsvuku, chizere namazita okumhura Mwari, chinemisoro minomwe nenyanga gumi.
Nyanga gumi idzi dzine simba seremadzimambo. Havana kugadzwa asi vaine simba remadzimambo. Vadzvanyiriri.
Vadzvanyiriri gumi vachasimuka panguva yekupedzisira. Nyika dzavo dzaive dzisati dzavapo pamazuva aJohane.
ZVAKAZARURWA 17:12 Nyanga dzinegumi dzawavona, ndiwo madzimambo anegumi, achigere kupiwa vushe asi uchapiwa simba samadzimambo pamwe chete nechikara nguva imwe.
Asi vadzvanyiriri gumi ava vachabatana kwenguva duku kuti vatonge mukati menguva yeKutambudzika. Chikara kana simba rakatariswa naSatani ndicho chinzvimbo chaPope. Danieri akaprofita pamusoro penyanga duku kana nyika duku.
Guta reVatican, mukati meguta reRoma, kunogara Pope ndiko kanyika kakazvimiririra kega kadukusa pasi rese. Vatican iguta duku kwazvo uye riri pedyo nezvikomo zvinomwe zvaive zvakavakirwa Roma, sezvinoratidzwa pamepu apa.
Guta reVatican rine vagari vasingasviki 800 uye riri panzvimbo inoda kuita sikweya kiromita rimwechete. (Zvichireva kuti kiromita rimwechete divi rimwe nerimwe pamativi aro mana).
Zvakadaro kereke yeRoman Catholic ndiyo bato rakanyanya kupfumisa pasi rese.
Ndipo pamuzinda pesimba richashandiswa naSatani pakupedzisira sezvo ichamupa simba guru munezvematongerwo enyika, zvechitendero uye mari.
Wakaipa ane mukana wekuenda kudenga kunotipomera.
Panongoshandurwa maKristu Mwenga waKristu vachipiwa miviri isingavori vanenge vasisatadzi uye Satani anenge asisakwanisi kuvapomera. Ipapo Kristu, ari Mutumwa Mukuru Mikaeri, anodzinga Satani kudenga.
ZVAKAZARURWA 12:7 Zvino kurwa kwakavapo kudenga; Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa inavatumwa vayo;
8 Vakasakunda, nenzvimbo yavo hainakuzowanikwa kudenga.
9 Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare, inonzi Dhiyabhorosi, naSatani, munyengeri wenyika yose; yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo.
Mwenga anoenda kuMutambo wemuchato kunodya. Vasikana vakapusa kana mapenzi nevamwe vese vemunyika vanoenda kuchikara kwavanonodyiwa.
Saka panokwira Mwenga waMwari kuDenga Satani anodzingirwa pasi otsvaga nzvimbo panyika.
Ndipo kereke yeRoman Catholic paicharipira muripo wayo wekuva kereke yakapfumisa pasi rese nekuti inenge yakanangwa naSatani.
ZVAKAZARURWA 12:12 Saka farai kudenga nemi munogara’ko. Munenhamo imi nyika navanogara panyika negungwa, nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nokuti unoziva kuti uchinenguva duku.
Diaborosi ane makore matatu nehafu chete enguva yeKutambudzika kuti atore nekutonga nyika. Nyika inenge iri munguva inorwadza kwazvo.
Satani achapinda mune umwe munhu achatora chinzvimbo chaPope. Zvichida achazvidaidza kuti Pope Petro weChipiri.
Ndiwo muripo ucharipirwa nekereke yeCatholic nekuda kwekuvaka kwayakaita bato gurusa rine simba rezvechitendero panyika. Zvinovaita kuti vanangwe zviri pachena naDiaborisi paachange akuda musha mutsva.
Akatanga hushe hweRoma aive Romulus. Mubati weRoma wekutanga aive Augustus. Mubati weRoma wekupedzisira aive Romulus Augustulus. Saka mubati wekupedzisira akaita zita rakafanana neremubati wekutanga. Kereke yeCatholic inoti Petro aive ndiye Pope wavo wekutanga. Saka tarisirai kuti Pope Petro wechipiri achavapo. Kana mukamuona, zvichareva kuti munenge mava munguva yeKutambudzika kana kuti nguva yeKutambudzika inenge yava pedyo kutanga.
DANIERI 11:21 "Panzvimbo yake kuchamuka munhu anofanira kuzvidzwa, akanga asina kupiwa kukudzwa kwoushe; asi iye achasvika nenguva yokufara kwavanhu, ndokutora ushe nokubata kumeso.
Pope wekupedzisira haasi kuzosarudzwa nenzira yemazuva ese nekanzuru yemakadhinari.
Achatora chigaro nechisimba nenzira dzakachenjera.
Takatarisana nezvigunwe gumi zvetsoka dzemufananidzo wemuHedeni kuna Danieri. Idzi ndidzo nyanga gumi dzechikara chekuna Zvakazarurwa Chitsauko 17.
ZVAKAZARURWA 17:13 Ivo vane ndangariro imwe, vanopa chikara simba ravo nevushe bwavo.
Vadzvanyiriri gumi ava vanenge vari munzvimbo dzakasiyana pasi rese vachapa Pope wekupedzisira simba ravo remauto avo.
Neimwe nzira mutungamiri wezvematongerwo enyika uye zvechitendero uyu achatonga vadzvanyiriri gumi ava kusvikira vese vaona zvinhu nenzira yaanoona nayo iye yekuti kuve nehurumende imwechete pasi rese saka vanobva vabatana pamwechete kuti vatonge pasi rese vari simba rimwechete guru.
Zvinotora mwedzi yakati kuti kuti America itumire hondo kunzvimbo iri padambudziko kunyika iri kure. Zvichava nyore kana kwava nevadzvanyiriri gumi vari munzvimbo dzakasiyana dzenyika pasi rese. Saka kwese kunozoitika dambudziko kunenge kuine simba remauto kudhuze rinogona kushandiswa kudzikisira dambudziko iroro.
DANIERI 2:43 Uye zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rokuumba naro, saizvozvo vachavhengana namarudzi avanhu, asi havanganamatirani, sezvinoita dare risinganamatirani, nevhu.
Makereke makuru nemapato awo nemusanganiswa wedzidziso dzavo dzinobva nedzisingabvi muMagwaro achatonga nyika. Dare rakasimba uye rinobata zvine simba. Asi kucharamba kuine vanhu vakazvimiririra vacharamba vachitenda nekutevera Magwaro akanyorwa (vari ivhu) uye havazofa vakakwana mumasangano ezvechitendero. Kana kuti havazodiwi zvachose nemasangano emakereke makuru. Ivhu nedare hazvifi zvakasangana zvikabatana.
MaKristu anoda kutevera Magwaro havagoni kufadzwa netsika dzemakereke uye mazano awo.
1961-0806 VHIKI RECHIMAKUMI MANOMWE RADANIERI
Uye tarirai kupararira kwenyangadzi kuti isike kuparadza, kupararira kwenyangadzi ... Nyangadzi yei? “Kuipa.” mazviona? Kuita kuparadza, chii ichocho? “kuparadza.” kupararira kweichi kuti chiparadze icho. Mazviona? Kupararira kwesimba reRoma kuti ritonge vasikana vose vakapusa mapenzi, maJuda nevamwe vose ... Tese tichava vaRoma kana hatizove chiro. Achaputsa sungano yake pakati pevhiki.
Kupararira kwenyangadzi... kana yaive nyangadzi munguva yaJesu apo maRoma akauya nekuratidzira kwavo, ichava Roma zvakare ichava nyangadzi kukereke... kuti iparadze, icharamba ichidya... achaita sei? Acharamba achidaro kusvika pakuparadzea. Ndiwo anenge ari magumo.
DANIERI 2:44 Zvino namazuva amadzimambo iwayo Mwari wokudenga achamutsa ushe, ...
Kusimuka kwevadzvanyiriri gumi ndicho chichava chimwe chezviratidzo zvekupedzisira Ishe vasati vauya.
Zvinodakadza kuti nyika dzakaita seRussia, Turkey, neIran dzinoita sedzinoita sarudzo dzakasununguka asi pachokwadi chaipo vanoguma vakutongwa nemunhu mumwechete anodzvanyirira. Iran inotongwa nemaMosiremu epamusoro pachinzvimbo chemutungamiriri wenyika akasarudzwa. Pope ndiye ega mudzvanyiriri akasarudzwa zviri pamutemo muEurope.
Kusimuka kwehudzvanyiriri uye vatungamiri vakasarudzwa vanotonga sevadzvanyiriri chiratidzo chenguva.
Parizvino nyika yemakereke iri mudambudziko.
Mhandara mukadzi akachena, anomiririra maKristu akaponeswa.
Vose maKristu vakangwara nemapenzi vakavata pakupedzisira.
Ndiyani ari kuita kuti vagare vavete? Vaparidzi vavari kuteerera vachiparidza.
1963-0320 CHISIMBISO CHECHITATU
Zvino ndicho chikonzero nhasi chekuti rumutsiridzo rwatinofanira kuva narwo... Tine rumutsiridzo rwemasangano; hatisati tasanganiswa zvakakwana. Kwete, kwete, kwete, kwete. Kwete,baba. Musafunge kuti tine kumutswa zvachose; hatina. Oh, vane nhengo dzekereke mamiriyoni nemamiriyoni, asi hapana kumutswa hapana zvachose. Kwete, kwete.
Mwenga haasati amutswa. Mazviona? Hakusati kwaita kumutswa, Mwari haasati azviratidza kuti amutse mwenga. Mazviona? Takatokutarisira. Kuchatora iko kutinhira kunomwe kusingazivikwanwi kuti kumumutse. Achakutumira. Akavimbisa kudaro. Zvino, zvino, tarirai. Zvino aive afa.
Kutinhira kunomwe kusingazivikanwe kuna Zvakazarurwa chitsauko 10 kunoreva mumashure mekumutswa kwevakafa kunoitwa neMutumwa mukuru.
Asi, rangarirai, patinongopinda mumumvuri merufu, “Ndini rumuko nehupenyu; ndichamumutsa zvakare.” uye kana Mukuru asvika pasi akabata tsvimbo iyoyo akaidzika pasi, ipapo, “nguva haizovipo zve.” Kana mutumwa iyeye, wekunaZvakazarurwa chitsauko 10, akaisa tsoka imwe panyika imwe pagungwa, murarabungu uri pamusoro pake, anopika, “nguva haizovipo zve.” Kana nguva iyoyo yasvika, muchamuka kubva pakati pevakafa. Apo vamwe vavo vose vanenge varere pakadaro apo, muchapinda.
Kutinhira kunomwe kunopa kutenda kwekukwira kudenga kuMwenga mumashure mekumutswa kwevakafa. Vatsvene vakafa kubva munguva nomwe vachakwira kudenga chete kana vamutswa kubva kuvakafa.
Vanorarama nevakafa vanokwira kudenga pamwechete. Kukwira kudenga ndiko kuratidzirwa kwekutenda kwekukwira kudenga. Kutaura kuti mune kutenda kwekukwira kudenga kana muchiri nemiviri yakafuka kuvora inhau dzenhema.
I VATESARONIKA 4:17 Zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwe chete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzose.
Mumwedzi wekupedzisira wehupenyu hwake hama Branham vaive vachiri vakatarisira kutinhira kumwechete kwekuna Zvakazarurwa chitsauko 6:1 uye kudanidzira (Mharidzo) uye Izwi (reMutumwa mukuru rekumutsa vakafa) uye Hwamanda (yekukwira kudenga).
1965-1127E NDAKANZWA ASI ZVINO NDAONA
Mwari Baba vanodiwa, munguva ino, ichava nguva yakadai pakuchava nekurova kwekutinhira rimwe zuva, uye Mwana waMwari achaburuka kubva kudenga nekudanidzira, nenzwi reMutumwa Mukuru, neHwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumutswa.
Kudanidzira kwaive kusingarevi mazuva aive kubva muna 1947 - 1965 apo hama Branham vaiparidza Mharidzo. Aiziva zvaaitaura nezvazvo asi isu taisaziva. Vazhinji vedu vaive vasati vatozvarwa kana kubatira Mwari ipapo.
Kudanidzira kwaizoitika chete apo Mwenga anotora zvakataurwa zvese achizvidzosera kuMagwaro otsigira Mharidzo nekubatanidza maVhesi eBhaibheri. Patinogona kutsigira dzidziso dzeMharidzo nekuparidza kubva muBhaibheri, ndiko kunozonzi kudanidzira. Nekuti Bhaibheri iShoko raMwari kwete Shoko redu.
1965-0429 KUSARUDZWA KWEMWENGA
Apo, Mwenga wechokwadi anokwezva Mwari, nekuchengeta Shoko raMwari.
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodikia, uti:
Kereke yekupedzisira inoti chikamu Magwaro, (inopisa) uye chikamu haiteveri Magwaro (inotonhora). Izvi zvinoiita inodziya saka tinotsamwisa Mwari.
Mwari anorutsa kereke yekupedzisira kubva mumuromo make mune Shoko rake.
Vanoenda kumakereke vanoti Bhaibheri rine zvakakanganiswa uye rinozvirwisa uye rakaturikirwa zvisizvo mune zvimwe zvikamu. Vanoti mavhesi akaoma avasinganzwisisi haana kukwanira. Iri ndiro simba guru rinosunganidza rechichechi-chechi.
Vezvesainzi vakaona kuti dare ndiro rine simba rakakurisa rekubatanidza kana kusunganidza kudarika zvimwe zvinhu zvese.
Jesu ndiye Shoko. Saka zvese zvavanotaura pamusoro peBhaibheri zvinozvidza Jesu nenzira imwechete.
Makereke paanoramba zvimwe zvikamu zveBhaibheri, vanenge vachiramba Jesu.
Makereke paanoramba zvikamu zveBhaibheri, Mwari anorambawo makereke.
Tariro imwechete iri kuvanhu vakazvimiririra vega.
Jesu akamira achirambwa ari kunze kwemukova wekereke asi ari kugogodza kumunhu mumwe nemumwe ari mukereke.
Nhasi, ivhu riri mutsoka dzemufananidzo wemuHedeni ndivo vanhu vakazvimiririra vachiri nerudo rwekutsigira zvavanotenda neMagwaro. Vaya vanoda kutenda zvakatendwa mazviri nekereke yekutanga. Ichi ndicho chiKristu chechokwadi.